ထရာအိုရေး အတွက် ဈေးပေးတာနည်းတဲ့ စပါး ၊ ဘာဆာ နဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ အော်စကာ ၊ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းတော့မယ့် ရွိုင်းအိုလာ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ထရာအိုရေး အတွက် ဈေးပေးတာနည်းတဲ့ စပါး ၊ ဘာဆာ နဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ အော်စကာ ၊ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းတော့မယ့် ရွိုင်းအိုလာ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းဟာ ဝုဗ် တောင်ပံ ကစားသမား အာဒမာ ထရာအိုရေး ကို ပေါင် ၁၅ သန်း နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ် ခဲ့ပေမယ့် ဝုဗ် အသင်း ဘက်က ပယ်ချ သွားခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဝုဗ် နည်းပြ ဘရူနို လာဂေး ကလည်း ထရာအိုရေး အတွက် ချိတ်ဆက် ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိနေကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပါး ဟာ ဝါရင့် ဂိုးသမားကြီး ဟူဂို လိုရစ် ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ် အထိ သက်တမ်းတိုး စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ကြောင်း ကိုလည်း ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ အသင်း ကတော့ ဂိုးသမား အီမီလီယာနို မာတီတက် ကို ၂၀၂၇ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆို လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရန်းနစ် ကတော့ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် ဟာ ကစားသမားကောင်း တယောက် ဖြစ်တာကြောင့် နယူးကာဆယ် က စိတ်ဝင်စား လာတယ် ဆိုတု ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် တခုဖြစ်ကြောင်း ၊ အခုချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမယ့်သူက သူမဟုတ်ကြောင်း ၊ လင်ဂတ် အသင်းမှာ ရာသီကုန်အထိ ဆက်နေသွားမယ် ဆိုရင်လည်း သူ့ အနေနဲ့ မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ခံစစ်မှူး ဗစ်တာ လင်ဒီလော့ဖ် ရဲ့ မိသားစု ဟာ ဘရန့်ဖိုဒ့် နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် တို့ ကစားခဲ့တဲ့ နေ့မှာ နေအိမ် ထွင်းဖောက် လုယူသူတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရပြီး လင်ဒီလော့ဖ် ဟာ မိသားစု အတွက် အချိန်ပေးဖို့ လာမယ့် ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ပွဲကို လွဲချော်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဖီအိုရင်တီးနား CEO ဘာရုန်း ကတော့ အင်္ဂလိပ် ကလပ် အချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဗလာဟိုဗစ် အတွက် ( ဈေးနှုန်း ) မေးမြန်း ခဲ့ပေမယ့် ခုချိန်ထိ ဘာ သဘောတူညီမှု မှ မရှိသေးပါဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စီးရီးအေ ထိပ်သီး ယူဗင်တပ် ကတော့ ဗလာဟိုဗစ် အတွက် ပေါင် ၂၉ သန်း + ဆွီဒင် လက်ရွေးစင် ကူလူဆက်ဗ် စကီး တို့နဲ့ ဗလာဟိုဗစ် ကို ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင် ထားပြီ လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
တရုတ် စူပါလိဂ် မှာ ကစားနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူဟောင်း အော်စကာ က ဘာစီလိုနာ အသင်းနဲ့ ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက် နေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြောဆို ခဲ့ပြီး အပြောင်းအရွှေ့ အတွက် ဘာစီလိုနာ ဘက်မှာသာ ( ကစားသမားသစ် စာရင်းသွင်းနိုင်ဖို့ ) အခက်အခဲ ရှိနေကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာဆာ နည်းပြ ဇာဗီ ကတော့ ဒမ်ဘီလီ ဟာ အသင်းအတွက် အရေးပါသူ တယောက်လို့ ပြောနိုင် ပေမယ့် အခု ဖြစ်ပျက် နေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ကလပ် အကြီးအကဲတွေ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပြီး သူ့ အနေနဲ့ ဒါကို သဘောတူ လက်ခံထားကြောင်း ၊ ဒမ်ဘီလီ မရှိမှုဟာ အသင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မဖြစ်ဘူးလို့လည်း ထင်ထားကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘရာဇီး ကလပ် ကိုရင်သီဟန် ဟာ အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး နဲ့ စာချုပ် ဖျက်သိမ်း လိုက်တဲ့ စပိန် တိုက်စစ်မှူး ဒီယေဂို ကော်စတာ ကို ခေါ်ယူဖို့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆွေးနွေး နေတယ်လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဆီဗီးလား အသင်းကတော့ နောက်ခံလူ ဒီယေဂို ကားလိုစ့် အတွက် နယူးကာဆယ် အပါအဝင် ကမ်းလှမ်းမှု မှန်သမျှ ကို ငြင်းပယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ကစားသမား ဘက်ကတော့ နယူးကာဆယ် နဲ့ Personal သဘောတူညီမှု ရယူထားပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
သွေးကြောပိတ် ဝေဒနာကြောင့် ဆေးရုံတက်ကာ အရေးပေါ် ကုသမှု ခံယူ ခဲ့ရတဲ့ စူပါ အေးဂျင့် မီနို ရွိုင်းအိုလာ ဟာ သိပ်မကြာတော့ခင် မှာ ဆေးရုံ ကနေ ပြန်ဆင်းလာပြီး နေအိမ်မှာ အားပြည့်လာအောင် ပြန်လည် နေထိုင် သွားနိုင်တော့မယ် လို့ မိသားစုနဲ့ နီးစပ်တဲ့ မိတ်ဆွေ တဦးက ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းနဲ့ အိုင်ဗရီကိုစ့် လက်ရွေးစင် အသင်းတို့ဟာ လာမယ့် မတ်လ ထဲမှာ ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက် ပြင်ဆင် တဲ့ အနေနဲ့ ခြေစမ်းပွဲ ကစားဖို့ ရှိနေပြီး ဒါဟာ သူတို့ ၂ သင်း ပထမဆုံး အကြိမ် ဆုံတွေ့ မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ထရာအိုရေး ကို ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ စပါး
Next Article ချဲလ်ဆီး vs တော့တင်ဟမ်?? ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၂၃ အတွက် မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ